Qeerroo Kan Beekutu Beeka! -
Qeerroo Kan Beekutu Beeka!
Tiishartii (qomee)Qeerroo Jedhu Uffachuun Qeerroo Nama Hin Taasisu!
Har’a impaayeera itiyoophiyaa Wayyaaneedhaan ukkaanfamtee bulaa jirtu
Itiyoophiyaa keessatti namni ykn sabni qeerroo hin beekne hin jiru.
Qeerroon kutataa, kan du’a hin sodaanne, kan waan kaayyeeffaterraa
duubatti hin jenne, farra gabroonfataa, falamataa haqaa ta’uu har’a
yoo wayyaanee fi ergamtoota ishii ta’e malee hunduu quba qaba.
Qeerroon kutataa, goota harka qullaa Isnaayipparii Aga’aazii dura
dhaabbatee bilisummaa, bilisummaa jedhee falamataa jiru ta’uus hundatu
ragaa baha. Farra gabroonfataati. Goota Wayyaanee kokkee qabee jiruu
Yoo maqaan Qeerroo Bilisummaa Oromoo ka’u lammiin, uummanni Oromoo
abdii bilisummaa koo jeedhee ittiin boona, ittiin dhaadata. Saboonni
biyyattii cunqurfamoonis qeerroon fakkeenya isaanii, qeerroon abdii
bilisummaa isaanii ta’uu dhugoomaa jiru. Diinnii fi ergamtoonni
diinaa, gantoonni sabaa garuu sochii qeerrootiin dhiphachaa, abdii
kutachaa, guyyaan itti dukkanaawaa jira. Qeerroon gurmuu gootota kan
waan eegalan amma fiixa baasanitti sobaa fi sossobaan,hidhaa fi
ajjeechaan duubatti hin deebine ta’uus hubataa jiru.
Eeyyee qeerroon tokko as jira yoo jedhan gamaan kan bahu, achi jira
yoo jedhan kan as jiru, tokko kunooti yoo jedhan kumni kan akka
hawwaanisaa gamasii huursu ta’eera. Qeerroon tokko gama sanii
ficilee jedhanii yoo hidhan gamanaa socho’aa,Qeerroon abalu jedhamu
ajjeefame yoo jedhan kumaa kitilli gamaa-gamasii fincilaa diina
dhiphisaa tureera, dhiphisaas jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo ABOn
durfamus sadarkaa amma irra jirru, sadarkaa duubatti hin deebinerra
Diddaan uummataa,FDG waggoota hedduu dura qeerroon eegale,
qeerroodhumaan gara fincila XGtti cehee kunoo hara’a sadrkaa
duubatti hin deebine, sadarkaa diina abdii kutachiisurra gaheera.
Qabsoo qeerrootiin diinatti aduun dhiitee lammiif bari’aa jira. Sochii
qeerroo lnabsii yeroo muddamaa, ajjeechaa suukanneessaa fi sobaa fi
sossobaan dhaabuu hin dandeenye. Qeerroonb bilisummaa Oromoo akkuma
maqaa isaa wareegama kaffalaa turee fi jiruun Oromootti bilisummaa
uffisuuf xiqqootu isa hafe.
Ergamtoonni, garaaf bultoonni tokko tokko biyya keessaa fi ala
ta’aanii yoo qabsoo ABO/WBO/ Qeerroon wareegamnii qaaliin itti
kaffalamee as gahe kana beekamtii dhorkachuu ykn ykn ofitti maxxansuu
yaalan argaa fi dhagahaa turreerra. Gafa barbaadan jaarmiyaan qeerroo
jedhamu hin jiru jedhu, gaafa barbaadan ammoo qeerroo fi ABOn Hidhata
hin qaban, qeerroon hoggansa waalta’aa hin qabu jedhu. Gaafa barbadan
ammoo qeerroon kun eenyuma jedhanii qorachuutti ka’u, guyyaa biraa
ammoo ulaa barbaadanii qoorroo saaqanii gidduu seenanii diiguuf
habjootu. Dhamahu. Garuu hunduu hin milkoofneef, qeerroon guyyaarraa
gara guyyaatti cimaa, eenyummaan isaa fi toftaan hoji iisaa diinaa f I
ergamtoota diinaa alaa fi keessaa holola gaggeessaniif iccitii ta’ee
Warri qeerroon hin jiru jechaa ture, warri qeerroon jaarmiyaa miti,
hoggansa hin qabu jechaa ture, warri ABO/WBO/Qeerroon akka waan quba
wali hin qabneetti hololaa tures har’a kunoo cinqiin , dhiphuun ,
guyyaan xumuraa geenyaan about qeerroo leenjisee nutti erge, ABOtu
tarkaanfii akkasii fi akkanaa fudhate, fudhachuuf jennaan akkas goone
jechaa jiru. Diinoonni Oromoos ta’ee ergamtoonni isaanii osoo hin
jaalatin kunoo eenyummaa qeerroo amanaa, osoo hin jaalatiin qeerroon
jaarmiyaa, qeerroon abbaa FXG bilisummaa Oromoof gaggeessuu ta’uu
fudhataa jiru. keessumaa jala deemtonni diinaa qeerroo dur hin jiru,
qeerroo dur jaarmiyaa miti, qeerroo dur hojii isaa beekumti
kennuufii didan har’a ofitti maxxanfachuuf kaachaa jiru. Keessa
qeerroo hubatanii danda’an diiguuf dadhaban kan inni itti dadhabe
qoddachuuf bololaa jiru. Haata’uutii akka yaadan hin taane.Qeerroon
as jira yoo jedhan achiin bahaa, achi jira yoo jedhan asiin bahaa
bakka qaban wallaalanii hongaawanii hafaniiru.
Qeerroon jaarmiyaas,nama dhuunfaas,qeerroon tokkos kumas,qeerroon
barataada, barsiisadha!, qeerroon qonnana bulaadha, qeerroon horsiisee
bulaadhas,qeerroon nama magaalatis fedhu baadiyyaadha. Qeerroon
dargaggeessas,qeerroon jaarsa. Qeerroon dhiira, Qeerroon
shamarranii.Ni barata, ni barsiisasi, qeerroon Gurraacha, diimadha.
Eeyyee qeerroon as jira yoo jedhan gamatti argama. Qeerroon isa sani
yoo jedhan isa kana ta’ee argama. Qeerroo Oromoo malee dinni bifa isaa
hin beeku, olmaa isaa hin beeku, fira malee diinni eessaa akkamitti
akka caasaa isaa diriirsee hojii saa hojjetu quba hin qabu.
Sabboontoota malee gantoonnii fi garaaf bultoonni bakka qeerroon
oolee bulu hin beekani. Oromiyaa keessa ta’uu malee eessaa eenyu
akka hooggansa kennus hin beekani.
Qeerroon bilisummaa Oromoo suuqaa diinni, gantoonni, fakkeessitoonni
hin beeknee ka’ee yoo diina barbadeessu, dhiphisu malee wanti beekamu
hin jiru. Funduraafis caasaa qeerroo bilisummaa Oromoo eenyuyyuu
itti dhamahu, eessaa akka ka’u, akkamitti akka hojii isaa, qabsoo, FXG
diinarratti gaggeessu argachuu hin danda’u. Qeerroo qabsoo bilisummaa
Oromoo irraa dhabuun hin danda’amu. Diinnii fi gantoonni, alaa fi
keessaa carraaqanis kun hin milkoofneef fuunduraafis itti hin
milkaawani. Qeerroo hojii isaa malee burqaa isaa hin argatani.
Qomee ykn Tiishartii kaawwachuuniis qeerroo nama hin taasisu.
Gantoonnii fi jala deemtonni diinaa qeerroon cimuu, kan duubatti hin
deebine ta’uu agarraan, diinniis kufaatiif wixxirfachaa jiraachuu
hubannaan qeerroomuu barbaadanis qeerroo ta’uu hin dandeenye, hin
danda’anis. Hareeda haddatanii, mataa haarrii halluu gurraacha
dibatanii mogolee waliin dhahuun qeerroo ofiin jechuunis isaan hin
qeerroomsine, qeerroo jechuun dargaggoo jechuu waan hin taaneef.
Qeerroo Bilisummaa Oromoo kan isaan gantoonnii fi ergamtoonni diinaa
alaa fi keessa ta’aanii hirriiganii miti.
Qeerruummaan hareeda bilqilchuu dhabuu miti, qeerroon isa goofaree
jigsee daandiirra yaa’uus miti. Qeerruummaan fakkeessuu ykn fakkaachus
miti. Qeerruummaan qomee ykn tishartii qeerroo jettu kaawwatanii
walgahii fi waltajjiilee adda addaarratti of argisiisuus miti.
Qeerruummaan kan biraati, qeerroon Oromoos kan biraati. Eeyyee
qoorrummaan mana shaayii balbalarra taa’anii oduu tarsaasu, diina
arrabaan ajjeesaa ooluu miti. Qeerroo bilisummaa kan beekuutu beeka.
Qeerumaan saalaan dhiira ta’uu miti. Qeerummaan dubars ta’uu miti,
qeerrummaan suubboo ta’uu fi dhiisuu miti. Qeerrummaan ilaalcha,
qeerrummaan dhugaaf, walqixxummaa fi mirgaaf dhaabbachuu dha.
Qeerrummaan uummata ofiitiif quuqamuudha, Qeerrummaan onnee
qabaachuudha. Qeerummaan mirgaa fi bilisummaa uummata ofiitiif
wareegama kaffaluu dha. Oduun osoo hin taane hojiin dura bu’anii
argamuudha. Qeerrummaan waan yaadan, waan karoorfatan galamaan amma
gahanitti cichuudha. Qeerroon bilisummaa Oromoo isa kana. Kanatu
qeerroodha. Isatu diina raasaa jira, isatuu lammii boonsaa jira. Isa
santu abdii Oromoo ta’ee wayyaanee oofee qileen gahee jira. Kan
deeggaramuu qabus, kan waliin dhaabbachuun qabamus isa kana. Kan
Oromoo bilisa baasus qabsoo,FXG,Kutannoo akka kanaati.
Next Ethiopia’s new Prime Minister is Abiy Ahmed, head of EPRDF’s Oromo bloc